မမွငျရသောပရဒိသုဟိုတယ် | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
Category Archives: မမွငျရသောပရဒိသုဟိုတယ်
ပွင့်လင်းအားလပ်ရက်များနှင့်အားလပ်ချိန်, ပင်လယ်ကနေအဆုံးမဲ့ Aleenta ရဲ့သဘာဝကမ်းခြေဘဝမှဘာမှ. သမုဒ္ဒရာ၏အသံ, မပျက်စီးသောလေ, နှင့်ပျော့ပျောင်းသောနေရောင်သည်သင်၏သီးသန့်အားလပ်ရက်များကိုသဟဇာတဖြစ်ခြင်းနှင့်ဟန်ချက်ညီစေသည်. ဤအပန်းဖြေစခန်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကြီးကို Sky နှင့် Earth သီးသန့်အိမ်များဖြင့်ဖန်တီးရန်ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်, Yoga … ဆက်ဖတ်ပါ
အရောင်, Purimuntra အပန်းဖြေစခန်းနှင့် Spa သို့အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်ခြင်းသည်တည်မြဲသောစွဲမှတ်မှုများကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်နှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်နေရောင်ခြည်နှင့်လတ်ဆတ်သောအတွေ့အကြုံကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။. အပန်းဖြေစခန်းသည် Pranburi တွင်တည်ရှိသည်, ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အဓိကအသစ်သော ဦး တည်ရာ. 19-ကာယရေးအဆင်ပြေသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည့်အရှေ့တိုင်းပုံစံအပန်းဖြေစခန်းအခန်း. ခေတ်သစ်ပုံစံအကြားရောနှောမှုတစ်ခု … ဆက်ဖတ်ပါ
အတိတ်သို့သွားသောခရီးတစ်ချိန်က, ယခင်ကထိုင်းစတိုင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိကိုလိုနီခေတ်တွင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောမိသားစု၏ယခင်ဂုဏ်ကျက်သရေကိုခံစားကြည့်ပါက Ban Bayan ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်, ဟွာဟင်, ဆန္ဒတစ်ခုအားကြီးသောသမိုင်းထိတွေ့အတူ. The 21 Ban Bayan ၏အခန်းများသည်ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသော၊ … ဆက်ဖတ်ပါ
Prachuap KhiriKhan,Thailand One says “if tomorrow never comes, this is the place of my secret hideaway” Imagine yourself inahome among the sea and the stars, အဖြူသဲကမ်းခြေ, နှင့်အပူပိုင်းဒေသအလယ်ကနေပုဂ္ဂလိကအေးမြလေပြေ. ငါအချို့အလုပ် Dao ရှိ, ဟွာဟင်သည်အပန်းဖြေစခန်း၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည့်အသက် ၉၀ အရွယ်ရှိကျွန်းသစ်အဆောက်အအုံကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်. … ဆက်ဖတ်ပါ
In the Shade of the Purity A place you never expect to leave. Ban IngNamisawarming, caring professional health resort and spa for anyone who is concerned with well-being and learning how to look after one’s self. Onlyashort drive fromBangkokto Pakkred, Nonthaburi, you will be found ofavarious series programmes for … ဆက်ဖတ်ပါ